कुन राशिको कस्तो प्रेम चरित्र ? – Puleso
कुन राशिको कस्तो प्रेम चरित्र ?
यो राशिका मानिसहरू प्रेममा बढी उत्साही हुन्छन्, तर यिनीहरूको प्रेमको अन्त्य एकदमै दुस्खद हुन्छ । वृष राशिका स्वामीहरू प्रेममा काल्पनिक मात्र हुँदैनन प्रायस् एकतर्फी प्रेमको सिकार हुन्छन् । वैवाहिक जीवन सामान्य रहन्छ ।
मिथुन राशिका मानिसहरूको प्रेम प्रसंग एकभन्दा बढीसँग चल्छ । यिनीहरू सदैव आफ्ना प्रेमीरप्रेमिकालाई खुसी देख्न चाहन्छन् । मिथुन राशिका स्वामीहरू प्रायस् कलाकार वा लेखकप्रति आकर्षित हुन्छन् । यौनमा बढी नै उत्सुक रहने भए पनि यौन जीवन संयमित नै हुन्छ ।
कर्कट राशिको प्रेम प्रसंग प्रायस् एकततर्फी हुन्छ । यो राशिका स्वामीहरू प्रेममा कुनै प्रकारको बन्धन स्वीकार गर्दैनन् । यिनीहरू सदैव प्रेम चाहन्छन् । उपहारभन्दा पनि हाँसो, खुसीका साथ प्रेम अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् भने यौनका मामिलामा सदैव कठिनाइ अनुभव गर्छन् ।
यिनीहरू यौनमा विशेष रुचि राख्ने खालका हुन्छन् । प्रेमको साटो प्रेम नै चाहन्छन् तर सदैव त्यस्तो हुँदैन, जसले गर्दा चाँडै हतोत्साही हुन पुग्छन् । यिनीहरूको प्रेम एवं वैवाहिक जीवनको अन्त्य कुनै दुस्खद नाटकझैं हुन सक्छ ।
कन्या राशिको प्रेम प्रसंग प्रसन्नता एवं आदान–प्रदानमा बित्छ । मानसिक एवं शारीरिक दुवै रूपमा आकर्षित भए पनि यौनमा प्रायस् कमजोर नै हुन्छन् । यिनीहरूको प्रेम परिभाषामा परिवार तथा बालबच्चा पनि समेटिन्छन् । कन्या राशिका स्वामीहरू आफूभन्दा पाका व्यक्तिप्रति आकर्षित हुन्छन् ।
तुला राशिका व्यक्तिहरू दयालु, बुुद्धिमान एवं सावधान व्यक्तिप्रति आकर्षित हुन्छन् । प्रेममा गम्भीर हुन्छन् । प्रायस् प्रदर्शन चाहँदैनन् तर वफादार हुन्छन् । यिनीहरूको उन्नति प्रेम वा विवाहपश्चात् नै हुन्छ ।
मीन राशिका स्वामीहरू बढी नै रोमान्टिक हुन्छन् । यिनीहरूलाई सौन्दर्यले आकर्षित गर्छ । प्रेममा उत्तरदायी पनि हुन्छन्, तर प्रेमको छनौटमा सदैव असफल हुन्छन् । यौन जीवन रोमान्स एवं कल्पनाले भरिपूर्ण हुन्छ, तैपनि यौन र प्रेमको क्षेत्रमा भावुकताको सिकार बन्न पुग्छन् ।साप्ताहिक